Kulan looga hadlayo ka hortaga tacadiyada loo geysto Haweenka oo Muqdisho ka furmay+Sawirro – Bandhiga
Kulan looga hadlayo ka hortaga tacadiyada loo geysto Haweenka oo Muqdisho ka furmay+Sawirro
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay kulan looga hadlayo tacadiyadda Haweenka loo geysto iyo sidii looga hortagi lahaa, waxaana ka soo qeyb galay mas’uuliyiin kala duwan oo ka socota dowladda Soomaaliya iyo ururada u dooda xuquuqda Haweenka.
Waxaa Shirkani soo abaabulay haweenka Baarlamaanka Soomaaliyeed ee labada Aqal kan golaha shacabka iyo Aqalka Sare, waxa uuna ku soo aaday iyadoo lagu guda jiro xuska maalmaha tacadiyada haweenka oo 16 maalin ah.
Guddoomiye ku xigeenka Kowaad ee aqalka sare Barlamanka Federaalka Somaaliya Abshir Maxamed Axmed(Bukhaari) oo kamid ah madaxda ka qeyb gashay ayaa waxa uu tilmaamay iney si dhaw ula socdaan ka dowlad ahaan xaaladaha adag ee heysta dumarka Soomaaliyeed, waxa uuna balan qaaday inuu ka shaqeyn doono sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada lagu hayo haweenka qeybahooda kala duwan.
Kulanka oo intiisa badan diiradda lagu saarayay arrimaha haweenka, waxaa sidoo kale looga hadlay doorka ay ka qaadan karaan siyaasadda iyadoo la dhisayo aqoonta iyo waxbarashada gabdhaha dalka.
Talaabooyin muhiim u ah ilaalinta xuquuqda haweenka ayaa looga hadlay shirka, iyadoo ay xusid mudan tahay in halkaasi ay khudbado ka jeediyiin qaar kamid ah ururada u dooda arrimaha haweenka.
Ifrah Foundation oo si gaar ah ugu ololeysa ka hortagga gudniinka fircooniga iyo arrimaha Haweenka ayaa ka qeyb galeysa kulanka.